Weerar keenay dhimasho daran oo Marinka Qasa iyo Israa’iil ka dhacay | Somaliland.Org
Weerar keenay dhimasho daran oo Marinka Qasa iyo Israa’iil ka dhacay
November 16, 2012	Gaza City Somaliland.org: Qaraxyo ayaa habeenkii jimcahu soo gelaayey ka qarxaayey Gaza, sidda sarkaal dhinaca caafimaadkaa oo reer falastiina uu sheegay in ilaa iminka tiradda dhimasho tahay 20 ruux tan iyo intii dagaalka Israa’iilbilowday, waxaa ku dhaawacmay 235 qof. Israa’iilayaa dhinaceedda sheegatay ilaa sadex dhimashaa oo ku naf waayey madaafiicadda tan iyo markii dagaalkaasi qarxay. Reer Gaza ayaa rajeynaya in xabad joojini dhacdo waayo maadaama uu booqasho dalka ku jooggo Raysal wasaarahii Masar, Israa’iilayaa qorsheynaysey xabad joojinta jimacaha maantaa si ay fursad u siiso masuulkaasi reer maser, sidda laga sheegay sarkaal reer Israa,iila oo ka hadlay ogolaansha raysal wasaaraha Israa,iil, laakiin mid sii raagaysa maha.
Hawshan ayaa suuragal ka dhigaysa in reer Gaza laftooddu xabadda joojiyaan, laakiin kooxda mitidkaa ee loo yaqaano al-Qassam ayaa sheegay inay dagaalka sii waddi doonaan. Xamaas al-Aqsa TV ayaa ku waramay in Israa’iilay waddo hawl-gallo inta lagu gudda jiro booqashadda raysal wasaaraha Masar mr Hesham Kandila, booqashadaasi oo la filaayo inay dhamaan doonta muddo sadex saacadoodd ku siman. Ciidamadda Israa’iilayaa cadeeyey inay duqeeyeen ilaa 150 bartilmaameed habeenkii iyo waaberiggii jimacaha, inyar kadib markii qoraxdu soo baxaday jimcahii ayaa meel u jirta xafiiska CNNta ilaa 500- 600 talaabo ayaa laba qarax oo waaweyni ka dhaceen caasimadda Gaza dhexdeedda. Waxaa laga ducaysanaayey duqayntaasi hurda la,aanta maqalkeeddu keenay iyo dareenka qaraxyadda soo socda iyo daawashadda madaafiicadda ka tegeysa Gaza ee lagu ridaayo Israa,iil. Bambooyinka soo dhacaayey ayaa ruxaayey albaabadda iyo weliba lafaha dadka, daruur madow ayaa cirka isku shareertay oo ay dhinac socoto onkodka qaraxyaddu.
Mar xalay jeliska lagu difaacaayo dadka shacabku qayliyey si uu uga diggo madaafiicdda soo socota magaaladda Ashkelon ee Israa,iil, laakiin xabadda hawdda sare ayaa ahayd mid iska socotey, iyadoo diyaarahada Israa,iila hawadda haadayeen siddoo kale. Kandila ayaa si dareen leh uga xumaaday dimashadda wiil yar oo hal sanno jira, waxaanu ku akhriyey aayad ka midda guraanka kariimkaa. Cidina kuma jiri karto xaalad deganaan la,aantaa oo ma daawan karto masiibadan sii kordhaysa, waxaa sidaasi yidhi Kadila, Raysal wasaaraha dalka Masar, tani waa mid aan suuragal ahayn, aduunka oo dhami waa inay soo farageliyaan ayuu sii raaciyey. Israa,iilna waa inay u hogaansantaa heshiiska, isla markaasina joojisaa gardaradda. Ilaa iyo markii hawl-galka tiirka difaacu bilaabmay diyaaradaha dagaalka ee Israa’iilwaxay bartilmaameedsadeen in ka badan 450 goobaha dhaqdhaqaaqa Xamaas ka socdaan.
In ka badan 400 oo madaafiica ayaa lagu ridey Israa,iil, waxaanna bilaabmay arbacaddii Tiirka difaaca hawl-galka ee Israa,iil, waxayna ciidamadda mulaterigga ee Israa’iilsheegeen in habkoodda difaaca circa ee loo yaqaanno (Iron Dome) uu joojiyey ugu yaraan 130, difaaca Israa’iilayaa sidaasi yidhi. Guutadda AL-Qassam ee mulaterigga Xamaas waxay sheegeen in habeenkii Khamiistii ay ku rideen Israa’iil527 gantaal.
Previous Post“Ardayda Jaamacada Gabiley Xumaan uma hayaan madaxweynaha ee waxay ka cabanayaan Komishanka”Next PostUmmaddu hadal xun iyo xajiin midna uma baahna	Blog